Uxanduva lwequmrhu - MH Thread
UMH waqinisekiswa ngu-Oeko-Tex®Standard100 kwaye wahlonishwa njenge-"Top 500 China Industry Industry" kunye ne "AAA Trustworthy Company".
Ukukhathazeka ngokukhuselwa kwendalo
Ngokukhula kweChina kunye noqoqosho lwamazwe onke, ukusingqongileyo kwendalo. Ukungcola ngokukodwa umoya, amanzi kunye nolwandle nakho kwande kakhulu. UMH uthatha uxanduva lokukhusela indalo.
Kwi-2015, i-MH iqalise umsebenzi okhuselekileyo wokhuseleko lokusingqongileyo, ubiza abasebenzi baseMh ukukhusela i-ecology kunye nokusebenzisa umxholo "woluhlaza" kwimisebenzi yangaphandle.
Njengempahla eyaziwayo yoshishino, i-MH iye yaqhuba ukuvelisa okuluhlaza iminyaka eyi-16, kwaye yenzelwa uphando malunga nendlela yokunciphisa inkqubo yokuveliswa kwemveliso engcolisayo, inikwe imali yokwakha i-laboratory yonyango, ukuqinisekisa ukuba amanzi angcolileyo angcolileyo kwaye ahlambulule onke ahlangabezana nemilinganiselo yendalo . Kwi-2015 MH nayo yazisa umdaka wokutya, i-polyester esebenziweyo, i-polyester eguquguqukayo ye-cationic, kunye neCotton-Initiative emine echungechunge lwezinto eziphathekayo zendalo, ukuqala kwizinto ezibonakalayo ukuqhuba ukuvelisa okuluhlaza.
Ululeko kunye nenkonzo yoluntu
UMH usele i-"Xiao dou ya" I-Scholarship Fund ukunceda abantwana abasemaphandleni ahluphekileyo ukuba bazalise izifundo zabo. UMH uxhaswe nge-7 abantwana abasweleyo iminyaka elishumi.
Yonke ihlobo, izisebenzi zokuzithandela ziya kuthumela isipho sokupholisa abantu abakuhlambulukileyo kunye ne-police traffic.MH isekela "umjikelezo wengubo" kwaye yanikela ngeengubo ze-10,000pcs kwiidolophana ezihluphekileyo eGuizhou, eYunnan nakweminye impofu.
Kunyaka ngamnye, amavolontiya ama-MH aya kutyelela abantwana kwiziko lezenhlalakahle ze-Ningbo Enmeier, bedlala nabantwana, kwaye banike izipho.
I-MH Imilinganiselo engundoqo: Ukugxilwa kwabathengi, Umsebenzi weQela, ukuCwangcisa, ukunyaniseka, ukuthembeka
UMH uye wasungula i-"HH Weekly" iphephandaba lekhompyutha, i-MH APP kunye nezinye iiplani zonxibelelwano zokusabalalisa isiCwangciso seMh.
I-MH ineemali ezikhethekileyo zokuxhasa imisebenzi yenkcubeko, njengengxenye yonyaka, umsebenzi wokwakha itekiti, ukukhenketho kwabasebenzi, njl. Mh nayo ineqela lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola, iklabhu yebhola ye-hiking, iklabhu yezithombe, kunye nabanye, iqela le-8 elikhululekile, elikhululekile kwi-MH abasebenzi ukuba babe nempilo enempilo.
Ukunyamekela impilo yabasebenzi
UMH unemali ekhethekileyo yempilo yabasebenzi. I-MH ihlolisise ukuhlolwa kwangokwenyama kubo bonke abasebenzi be-MH, ukulungiselela iintetho zempilo, ukuphila kwindlela yokuphila enempilo kunye nolwazi lokugcina impilo. Ngaphandle koko, i-MH isebenze i-"Firefly" yomsebenzi wenkxaso-mali yomxhaso, ukunceda abasebenzi base-MH abanesifo esiyintloko okanye iintlungu. I-"Firefly" mutual fund iye yanceda abasebenzi abangaphezu kweshumi kwiminyaka eyi-2 eyadlulayo.